सार्वजनिक यातायात ब्यवसायी रोग, भोक र बैंक किस्ताको तनावमा ! कहिले देखि खुल्छ र यातायात ?
सार्वजनिक यातायात ब्यवसायी रोग, भोक र बैंक किस्ताको तनावमा ! कहिले देखि खुल्छ र यातायात ? काठमाडौं : को,भिड–१९ संक्रमणको पहिलो चरण शुरु भएसँगै ०७६ चैत ११ बाट मन्त्रिपरिषद्ले देशभर पूर्णरुपमा लकडाउन गर्‍यो । ०७७ साउन ६ मा सरकारले ‘लक,डाउन खुल्यो’ भनेपछि बल्ल लामो र छोटो दुरीका सार्वजनिक यातायात चल्न थालेका थिए । तर, संक्रमण रोकिएन । स्थानीय प्रशासनले जोर–बिजोर प्रणाली र निषेधाज्ञा जारी गरेपछि गत वर्ष ६ महिना पनि सार्वजनिक यातायात चल्न पाएनन् ।
जब, यातायात सुचारु हुन थाल्यो, फेरि को’भिड–१९ संक्रमणको दोस्रो चरण शुरु भयो । ०७८ वैशाख १६ पछि देशभर निषेधाज्ञा लागु हुँदा लामो र छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ । अघिल्लो वर्षको लकडाउनका कारण यातायात क्षेत्रबाट धेरै विस्थापित भएको र सयौंले रोजगारीसमेत गुमाएको बताउँछन् यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला ।
‘भर्खर बामे सर्न थालेका थियौं’ सिटौलाले भने, ‘दोस्रो महामारी शुरु भयो, हामी तहस–नहस भयौं ।’ गत वर्षको लक,डाउन र निषेधाज्ञाको बीचमा सार्वजनिक सवारी साधनको कागजपत्र फेल भएको जरिवानासमेत तिर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ। ‘यो क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकै छैन’ सिटौला भन्छन्, ‘बैंकले हामीलाई सहुलियत गरेको छैन, यसमा राज्यको तर्फबाट कुनै पहलकदमी भएको छैन ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १० खर्बको लगानी छ । ६५ प्रतिशत लगानीकर्ता स्वरोजगार छन् । सो क्षेत्रमा १० लाखले प्रत्यक्ष रोजागरी पाएको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन् । यातायात व्यवसायीका महासचिव सिटौलाका अनुसार सो क्षेत्रसँग करिब ४० लाख मानिस आश्रित छन् । यातायात सञ्चालन नहुँदा मोटर पार्टस बिक्रेता र सवारी वर्कशपहरु समेत प्रभावित भएका छन् । गाडी नचले पनि बैंकको ब्याज किस्ता चलिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
गाडी खुल्नुअघि चालक, सहचालक र काउन्टरका कर्मचारीलाई खोप लगाउन माग गर्दै ब्यवसायीले दुईपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लिखित आग्रह गरेका छन्। तर, सुनुवाई नभएको बताउँछन् सिटौला। ‘अझै गाडी खुल्ने छाँटकाँट छैन’ सिटौला भन्छन्, ‘स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी जसरी फ्रन्टलाइनर हुन्, चालक पनि फ्रन्टलाइनर हुन, त्यो कुरा सरकारले बुझेको छैन ।
यातायात क्षेत्रमा १५ लाख मानिसलाई खोपको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । ‘हाम्रो पहिलो माग चालकहरुलाई खोप नदिई जोखिम हुन्छ’ सिटौलाले भने, ‘चालक र सहचालक र काउन्टरमा टिकट काट्नेहरुका लागि भ्याक्सिन मागेका छौं तर, फ्रन्ट लाइनर मजदुरको अपहेलना भयो ।’ देशभर को’रो ना संक्रमण शून्यमा झरेपछि सार्वजनिक सवारी पुरानो लयमा फर्किन कम्तिमा ५ महिना लाग्ने व्यवसायीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
‘गाडी बसिरह्यो भने इन्जिन खराब हुन्छ, ब्याट्री र टायर पनि जान्छ’ महा सचिव सिटौलाले भने, ‘सरकारले तत्काल खोल्ने निर्णय गर्दा पनि म’र्मत नगरिकन चलाउन मिल्दैन ।’ ०६९ सालदेखि भाडा समायोजन हुन नस’केको यातायात क्षेत्र थप सं’कटमा परेको उल्लेख गर्दै सिटौलाले भने, ‘हामीले गाडी कुहाउन राखेका होइनौं, तर यसमा कसैको होमवर्क देखिएन ।’ दोस्रो चरणको महामारीसँगै झण्डै दुई महिनादेखि बन्द भएको यातायात सुचारु गर्नुअघि यातायातका कर्मचारी र मजदुरलाई खोप उप लब्ध गराउनुपर्ने माग यातायात व्यवसायीले उठाएका छन् । ‘गाडी कुहिए, मजदुर भोकै छन्’ महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘यातायात ब्यवसायी रोग, भोक र बैंकको किस्ताको तनावमा छन् ।